Federal Chair သက်လယ်ဆွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Money & Finance » Federal Chair သက်လယ်ဆွဲ
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 18, 2013 in Money & Finance, U.S. News | 15 comments
ဖက်ဒရယ် ရီဇာ့ဗ်ဆိုတာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဗဟိုဘဏ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်ဥက္ကဌကို သမတ ရွေးပြီး လွှတ်တော် သဘောတူချက် ယူပါတယ်။ နေရာထိုင်ခုံ အမြဲလှုပ်နေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံလိုမျိုးမှာ အဲဒီရာထူးနဲ့ တရားရုံးချုပ် တရားသူဂျီး ရာထူးများသာ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီ မြဲတာပါ။ အဲဒီဘဏ်ဥက္ကဌသည် ယူအက်စ် ငွေကြေး မူဝါဒပိုင်းမှာ သမတထက် ဩဇာရှိလို့ သိပ်အရေးပါ ဂုဏ်ရှိပါတယ်။ (ဤဂါး အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ ရေးသော ဇဂချက်။)
ယူအက်စ်ဖက်ဒရယ်ဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဌ ဂျက်နက်ရဲလန်အား သမတ အိုဘားမားမှ နောက်နှစ်တွင် ဘဏ်ဥက္ကဌ ဘန်ဘာနက်ကီ နေရာ အစားထိုးရန် လွှတ်တော်သို့ အဆိုပြုလိုက်သည်။
အိုဘားမားက ဖက်ဒရယ်ဘဏ် နှစ်တရာသမိုင်းတွင် ပထမဆုံး အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သူ ပေါ်ထွက်လာစေမည့် ကြေငြာချက်အား အိမ်ဖြူတော် ညစာစားပွဲ၌ ကြေငြာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သူမအား သမတက နိုင်ငံ၏ အရေးပါဆုံး စီးပွားရေးပညာရှင်နှင့် မူဝါဒရေးဆွဲသူဟု ချီးမွှမ်းဂုဏ်ပြုလိုက်သည်။
ဘယ်သူ နောင်လာမည့် ဖက်ဒရယ် ဥက္ကဌ ဖြစ်မည်လဲဆိုတာ နိုင်ငံရေးလောကမှ လွန်ခဲ့သော လများအတွင်း ပြောဆိုနေကြလို့ သူမအကြောင်း အချို့တဝက် သိကောင်းသိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့ စာဖတ်သူ သိမည် မထင်သေးတဲ့ သူမနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်ငါးချက်ကို ဖော်ထုတ်ရလျင်…. ဒန်တန့်တန်… (ခလေးတွေ မဆူဂျနဲ့… အကောင်ဒွေ နောက်ဆုတ်၊ သာမီးလေးတို့ ရှေ့တိုး… ကြေးမုံဂျီး ရုံပြင်ထွက်…။)
၁။ သူဌေး သူဌေး.. သိပ်ချမ်းသာတယ်။ ဖက်ဒရယ်ဘဏ်ရဲ့ နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာရေး တင်ပြချက်တွင် ဒေါ်ရဲလန်သည် အချမ်းသာဆုံးသော ဗဟိုဘဏ်အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ် အဖွဲ့ဝင်များထဲတွင် တဦးအပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်း နယူးရောက် တိုင်မ်းသတင်းစာမှဆိုသည်။ ဘယ်တွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု ဓနဥစ္စာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း မည်မျှ ချမ်သာသလဲဆိုတာ သိချင်လျင် ပေးထားတဲ့လင့်ခ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ (မူရင်း အင်္ဂလိပ်စာကိုရှု…)
၂။ အတော်ဆုံး ဖက်ဒရယ်ဘဏ် ပုရောဟိတ်။ ၂၀၀၉ မှ ၂၀၁၂ အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော ဖက်ဒရယ်ဘဏ် မူဝါဒ ပဲ့ထိန်း ၁၄ဦး၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းချက် ၇၀၀အား လေ့လာထားသော ဝေါစထရိဂျာနယ် စစ်တမ်းတွင် ဒေါ်ရဲလန်သည် အများဆုံးမှန်အောင် ယေဘူယျ ဟောကိန်းထုတ်သူဖြစ်၏။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ အလုပ်သမား၊ စီးပွားရေး ကြီးထွားနှုန်း တို့တွင်လည်း သူမ၏ ခန့်မှန်းချက်များ ထိပ်ဆုံးလေးယောက် တွင်ချိတ်သည်။
၃။ နိုင်ငံရေး ဩဇာခံမဟုတ်။ သူမဟာ ကလင်တန် လက်ထက် စီးပွားရေးအကြံပေးကောင်စီ အကြီးအကဲ ၂နှစ် လုပ်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ရော ကွန်ဂရက်စ်နဲ့ပါ ကင်းအောင်နေတယ်။ (သူ့အရင် တစ်ပြေးခဲ့ဖူးတဲ့ ၊စဂါးချပ်) ဦးလယ်ရီဆမ်းမား ဆိုရင် အမျိုးသား စီးပွားရေး ကောင်စီကနေ သူထွက်သွားတဲ့ ၂၀၁၀ နှစ်အကုန်ပိုင်းမှ စလို့ သမတနဲ့ လေးခါတွေ့ခြင်း အပါအဝင် အိမ်ဖြူတော်ဆီ ဆယ်ကြိမ်ထက်မနည်း ဝင်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ သူမကတော့ ၂နှစ်အတွင်းမှာ အိမ်ဖြူတော်ကို တကြိမ်ပဲ ရောက်ခဲ့သည်။
၄။ လင်က အချဉ်မဟုတ်၊ စီးပွားရေး နိုဘဲလ်ဆုရှင်ဂျီး။ ယောက်ျားနာမည်က ဂျော့အက္ကာလော့ဖ်၊ ဘာကလေ တက္ကသိုလ် စီးပွားရေးပညာရှင် တဦးဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့ အထင်ရှားဆုံး ဆောင်းပါးများထဲက တခုညွှန်ပြဆို “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism.” ဆောင်းပါးမှာ သတင်းအချက် အလက် စီးဆင်းပျံ့နှံ့မှုကို တပတ်ရစ်ကား ဥပမာထား အသေးစိတ် တင်ပြထားသည်။
၅။ ဗဟိုဘဏ်တခုကို ဦးဆောင်သူ ပထမဆုံး အမျိုးသမီးတော့ မဟုတ်။ ကမ္ဘာတလွှား ဗဟိုဘဏ် အသီးသီးအား ဦးဆောင်နေသူ အမျိုးသမီး ၁၇ယောက်နှင့်အတူ (စုစုပေါင်း ၁၇၇ ဗဟိုဘဏ်ရှိ၏) ယူအက်စ်ဖက်ဒရယ်ဘဏ် အကြီးအကဲ ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီးသာ ဖြစ်လာမည်။
ရည်ညွှန်း – http://finance.yahoo.com/blogs/daily-ticker/janet-yellen-five-things-know-obama-fed-chair-112259135.html
Janet Yellen: Five Things You Should Know About Obama’s Fed Chair Nominee
By Lauren Lyster | Daily Ticker – Wed, Oct 9, 2013
President Obama has nominated Federal Reserve Vice Chair Janet Yellen to replace Ben Bernanke as head of the Fed starting next year.
Obama made the announcement this afternoon in the State Dining Room of the White House — setting Yellen on course to become the first woman to lead the Fed in its 100-year history.
The president called her “one of the nation’s foremost economists and policy makers.”
You’ve likely already learned some things about her in the politicized debate over the last few months surrounding who would be the next Fed chair. But in the accompanying video and below, we reveal the five things about her you may not know about Yellen:
She’s rich. Annual financial disclosures that the Fed has released show Yellen to be one of the wealthiest members of the central bank’s board of governors, the New York Times reports. Check out the video to see what she’s invested in and how many millions of dollars her assets are worth.
She’s the top Fed forecaster. A Wall Street Journal study of 700 economic predictions made by 14 Fed policymakers from 2009 to 2012 found Yellen was the most accurate forecaster overall. She also scored in the top four for her forecasts on inflation, labor, and growth.
She’s notapolitical insider. Though she was head of the Council of Economic Advisers for two years during the Clinton administration, she doesn’t appear to have close ties to this administration or Congress. While Larry Summers has visited the White House at least ten times since he left as director of the National Economic Council at the end of 2010 – including four meetings with the president – Yellen has been to the White House only once in two years. Check out the video to see how that compares to her meetings with other central bankers and to her visits to Congress.
She’s married toaNobel Prize – winning economist. Her husband is George Akerlof, an economist at UC Berkeley. One of his best known articles: “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism.” The paper delves into the theory of information asymmetry by using the market for used cars — lemons — as an example.
She wouldn’t be the first woman to leadacentral bank. While she would be the first woman to head the Fed, she would joinalist of 17 women already who lead central banks around the world (that’s out of 177 central banks). See the video for some of the countries where women have this top spot.
အဟွတ်…. Alan Greenspan လောက် တော်မှ ညွှန်းပါ ကိုရင်ကြောင်ရယ်…
ဟို ဘိုးတော်ကြီးက အိုသွားလို့ပါ… သူ့လောက်တော့ အပျော့…
အညိုးတမီးမို့ အထင်တေးတဲ့ တဘောရားးးးး
(ခလေးတွေ မဆူဂျနဲ့… အကောင်ဒွေ နောက်ဆုတ်၊ သာမီးလေးတို့ ရှေ့တိုး… ကြေးမုံဂျီး ရုံပြင်ထွက်…။)
ခုတလော ကြောင်ကြီး စိတ်ကောင်းဝင်နေတယ်။
သုဘာသိတာ စ ယာ ၀ါစာ။
ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။
ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း နေ ရာတွေကို
အမျိုး သားများ အတွက် ဂုဏ်ယူစရာကိစ္စ များ
IMF ရဲ့အကြီးအကဲကလည်း.. အမျိုးသမီးပါပဲ..ကိုကိုကြောင်ရယ်.. Christine Lagarde တဲ့.။
ဒါတွေ အူးကြောင် လေ့လာနေပုံထောက်တော့… မကြာခင် ရွာပြန်ပီ;..
၂၀၁၅ ကြောင်ဖြူတစ်ကောင် အမြည်းနန့်ပီး ပန်းကိုက်နေပုံ ကို မဲဆန်ဒ လက်မှတ်မှာ
အမှန်ခြစ်ပေးပါလို့… ကြောင်ဘောင်သစ်ပါတီ၏ လည်ယာပြန်စားရေး ပြောပေးဆိုခွင့်ရှိသူ
ကြောင်နှစ်ကောင်စာပေတိုက်က ကရင်စီတို့ မြေးအဘိုးပိုင်တာလားဟင်။
အင်း တမျိုးကြီးပဲနော် ကိုကြောင်ကြီး ဒီလို စာမျိုး ရေးတာကို ဖတ်ရတာ ဟာတာတာကြီးလိုပဲ။ နည်းနည်းပါးပါ အရွှန်းလေး ဘာလေး ထည့်ပါဗျ။
ဆရာကြီး သုခမိန် ကြောင်ကြီး မ ကြောင် ဘူး ဆို တာ ကျနော် ရွာ ဝင် ခါ စ ကတည်း က သိ ပြီး သား ပါ ။
အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာ မိန်းမတွေက ပိုတော်ပြီး လာဘ်စားမှုလည်း အမျိုးသားတွေထက် ပိုကင်းစင်ကြောင်း စစ်တမ်းများ အရသိရပါတယ်… ဒီတော့ ဒီရွာလဲ နာတို့လို တော်သိထက်မြက် … အဟွတ်… အဟွတ်… (စဂါးများများပေါရင် ချောင်းကဆိုးဘီ) တဲ့ အမျိုးသမီးတွေသာ အူးဆောင်သင့်ပါဂျောင်း
အေးချေး…ပုဂျွန်ပဲ သွားမွေးစမ်းပါ ကျောင်းအစ်မရာ အဟီးဟီး …အဲ့မျိုးက ခန့်ညားသားနားတဲ့ ကျော်တို့အမျိုးသားတွေအလုပ် .ခုခွိခုခွိ …ပုံ ဆောရိုးစော်ကြည် ( မဟာပုရိသ၀ါဒီ )
အူးဆောင်ချင်တယ်ဆို အရင်လူတွေတီးထားတဲ့ ခေါင်းကအမာရွတ်လေးပြန်စမ်းကျိပါ သောက်ကောင်မားးးး
အတင်း/အရန်းကာရော/အပ်ဒမ ကို ပါးနပ် လိမ္မာ၊
ဉာဏ်ရည်မြင့်မားးးးးးး စိတ်နေစိတ်ထား ကောင်းမွန်
အဟု အဟု အဟမ်းးးးး ဒီ ချောင်းနှယ်။
ဝါး ဆီ က ကူးတာနေမယ်။
တို့ အရေအသွေးတွေက နည်းဘူးရယ်။ ဝါးပြောတာ နည်းလို့ ဖြည့်ပေးတာ။
ဆဲ ချင်ရင် သူ့ကို ဆဲပါ ပလိတ်သတ်ကြီးးးးး
သူ စပြောလို့ ပြောတာပါ။